40 Chii chinoita kuti murume ade kuvata nemahure mu kadzi wake aripo?
Chihure chese chinoitiswa nokumhura munhu wawakaroorana naye, kusava nehanya naye, kusamuona somunhu akakukodzera, kana kusamuda zvachose. Varume vakawanda verudzi gwedu vanoona sokuti mukadzi wemumba haasi munhu chaiye asi chinhu chake chokutambisa kuratidza kuti murume. Saka kana akaona umwe mukadzi anoda kuiswa, (sezvakaita mhure) pamwe fungwa yake haitomboyeuki kuti ane mukadzi kumba. Anokwanisa kutovata nehure riya obhadhara mari kuita sokuti ane zvara yokuisana izvo bodo, mukadzi kumba akatomirira kuti murume akauya tichaisana tigovata.
Koitazve nyaya yokuti varume vakawanda vanohura hvakwanisi kugutsa mukadzi wekumba. Frustration yacho yokutadzi kugutsa mukadzi ndiyo inoitisa kuti aende kumahure nokuti mahure akawanda anongodetemba chero murume amupa mari achiita sokuti anakigwa chose izvo bodo kuita kuti shasha igofunga kuti yagona kuitira kuti igodzoka mangwana neomwe mari. Varume vakafanana nezvanana pakuda kupururudzwa panyaya dzokuisana.
Koitazve varume vane vakadzi vasingahwisisi kuti murume anofanira kugara achiisana nomukadzi wake mumba. Mukadzi akaita tsika yokukangamwa kuisana nomurume wake zvakakodzerana nokuda kwemurume, sokuti pavhiki moisana 7-10 times, murume anotanga kuona sokuti ari kushaya obva atsvaka kumwe. Vakadzi vanoonekwa sokuti kana ava mumba zvokuisana haachazvikoshesi sezvaanoita dzimwe nyaya. Uku kusahwisisa kwedu isu vakadzi. Murume anofanira kuvatwa naye kakawanda pavhiki. Chero usina zemo, bvuma kuvata nomurume wako kana iye ane zemo, uye taridza kuti wange uchitozvifungawo. Ngatisakundwa nemahure.
Vakadzi kazhinji vanohuriswa nokushaya rudo mumba. Kana murume asingaratidzi rudo.
41 Kungosura sura ese pese kunokonzerwa nei?
Chinotori chigwere asi pamwe zvinoitiswa nokusava nehanya nezvokudya zvako.
1 Kuva munhu akakora. Vanhu vakakora vanogarosura kupfuura vatete
2 Kungoda kudya pasina TSIKA. Munhu anofanira kudya katatu pazuva. Pakati penguva idzi unofanira kumwa mvura yakawanda. Vamwe vanongoti pese pavaona zvokudya vodya. Zvinosurisa izvozvo.
3 Kusahwisisa BALANCED DIET
4 Kusatsenga zvokudya pakudya kunoita ukasire kuminya uchiminya mweya uchazoda kubuda nokusura nokudzvova.
5 Kudya zvokudya zvinosurisa vakaita semutakura, mazai, muriwo usina kubikwa zvakakwana, mukaka, nyemba, hanyanisi.
42 Ndebvu kumeso kureva munhu anonaka here pabonde? Kunaka kwemunhu pakuvatana hakunei nezvaunoona paari. Kune zvokuita nemafungire ake panyaya dzokuisana. Munhukadzi ane ndebvu anofanira kuenda kuCHEMIST ondopiwa HAIR THINNING PRODUCTS zvikuru CREAM inohi EFLORNITHINE yaunoshandisa kwemwedzi yakati kuti zvisati zvatanga kushanda.
Kuva nendebvu uri munhukadzi zvinoratidza kuti pane ma HORNONE asina kumira mushe ma ANDROGEN ne TESTOSTERONE. Unofanira kukasira kuenda kuvarapi vakuongore nokuti kana uri munhu wechidiki unokwanisa kusvodza mimba kana kuita CANCER. Zvikonzero zvendebvu zvakati wandei saka enda undoonekwa.